N’isiokwu a, any anere na nahe abụọ anyị kwenyere na-achọpụta na ewu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nwere:
1 Nkebi # 1: Ọkachasị Web Weebụ dan Media Sosial
Ekzụta ekwentị ọhụrụ? Ụ bụ ma ọ bụ iPhone ma ọ bụ Samsung.
Iji mee mkpebi mara mgbe ị na-edebanye aha maka Bochum – ị ga – ebu ụzọ ghọta mkpa gi, ele anya na tụnyere ya, na họrọ onye nlekọta nke kachasị mma markah ebe nrụọrụ weebụ gị.
Nkebi # 1: Ọkachasị Web Weebụ dan Media Sosial
Twitter: 316,000. laman web: https://www.hostgator.com
Statistik Rangkaian Sosial – Facebook: 214,991
Twitter: 478,000. laman web: https://www.siteground.com
SiteGround nwere ike ọ gaghị abụ aha ezinụlọ kama ha ejiriwo nwayọọ nwayọọ na-ewuli aha ha dị ka onye na-enye ndị na-enye gị onyinye. Jerry Low na – eji makarụ ha maka ụrụ ya onye blog nke na-ekwu okwu banyere otú ha si dị mma.
Statistik Rangkaian Sosial – Facebook: 30,593
Twitter: 344,00. laman web: https://www.name.com
Yiri GoDaddy, Aha.com tidak ike ọ gaghị abụ ụlọ ọrụ ị na-eche banyere ọbịbịa ọrụ. Ma, ngalaba na-edeba aha ụlọ ọrụ na-enye ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ atụmatụ na mgbakwunye na ngalaba aha ọrụ.
Statistik Rangkaian Sosial – Facebook: 48,464
Twitter: 375,000. laman web: https://www.a2hosting.com
Statistik Rangkaian Sosial – Facebook: 49,233
Twitter: 124,000. laman web: https://www.kinsta.com
Radlọ ọrụ nnukwu ụlọ ọrụ ọzọ na-efe efe n’okpuru radar, Kinsta bụ a na-ejikwa WordPress Bochum ụlọ ọrụ na-enye persembahan teratas na p narụ iche WordPress Bochum ọrụ.
D In nnọọ ka InMotion Bochum, anyị etinyere Kinsta nnọọ ukwuu tụnyere ndị ọzọ na-elekọta WordPress ụlọ ọrụ. Ma ụrụ ha dị ebube hà na-enyere ha aka egwuregwu mgbasa ozi? O doro anya na ọ bịghị, dị ka ha nwere 126,000 Twitter na-eso ụzọ ma na-akwụ ụgwọ dịtụ karịa InMotion na Facebook na ndị na-eso 19,153.
Statistik Rangkaian Sosial – Facebook: 19,153
N’ihe banyere ewu ewu na anntanetị, mgbasa ozi ọha mmadụ bụ nanị otu ọkara nke akara. Arakara ọzọ anyị kwesịrị ile anya bụ laman web di Google Trends.
Iji "Masya na oge," anyị nwere ike ịchọta otu ewu na oge ole a na-eji ụfọdụ okwu (ma ọ bụ ụlọ ọrụ) mee ihe na nchịkọta ihe nchọgharị n’ime oge ụfọdụ.
Ọ bụ ezie na GoDaddy dan tidak oke mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị n’etiti ndị anyị depụtara n’elu, hà ga-enwe oke ahịa na-ekere òkè na Google Trends?
Hostgator, Bluehost, SiteGround, na DreamHost nile edebere n’ime ihe 25 ma ọ bụ n’okpuru e a site na SiteGround bụ onye kasị ala n’etiti mmadụ ise.
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ndị ọrụ nchịkọta dị elu dị oke aka dị ka InMotion Bochum, Kinsta, A2Hosting, na ọbụna WPEngine, GoDaddy ka na-enwe nnukwu ụzọ na nchịkọta nkeụ.
Mgbe a bịara na njirimara nke onye na-eweta nhazi, enwere ọtụtụ ihe nwere ike imetụta ha. Ị na-ekepụta saịtị saịtị dị mfe? Adakah usoro omume ọ bụla na-agba ọsọ? Ị chọrọ inwe ụlọ ahịa dị n’ịntanetị? Ihe ndị a na ndị ọzọ nwere ike imetụta àgwà nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ.
Dịka ule na nyocha anyị, GoDaddy dị mma markah ndị mmadụ chọrọ nwee blog ma ọ bụ weebụsaịtị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ dị mgbagwoju anya ma ọ bụ ụlọ ahịa eCommerce, ndị na-enye ọrụ dị ka Kinsta atau Enwe Mmasị na-enye nahe.
Na njedebe nke ụbọchị, ọ bụ ihe niile banyere ihe ị chọrọ na mkpa pasar gị na ebe nrụọrụ weebụ dị ka ụlọ ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ na-enweta ka dị iche iche laman web mk. Ụ bụrụ na ị bụ blog dị mfe, mgbe ahụ, GoDaddy dan tidak ike karịa. Kwesịrị iji nweta ihe onwunwe ndị ọzọ? Eleghi anya ọ ka mma ịga Kinsta ma ọ bụ InMotion Bochum.